Tyler ẹkesiode gara ọkara ụlọ, -eme na inyo m enyo,en! - SUPPORT KEVIN & TYLER
A year ago, Tyler Lang was sentenced to three months time served, ọnwa isii n'ụlọ mkpọrọ, six months in a halfway house, and a year of supervised release, along with restitution. Today, he was released from the halfway house and his term of supervised release ended!
Tyler was sentenced under the Animal Enterprise Terrorism Act for freeing 2,000 mink si a ajị anụ ugbo na ịgba-sere "Ntọhapụ bụ Ịhụnanya" na n'akụkụ nke a n'ọba ya codefendant Kevin Johnson. The ajị anụ ugbo mechiri n'ihi nke ha edinam — saving generations of animals from being tortured and killed there.
Tyler e echerekwa ta na a ụtọ na-akpụ akpụ na na ndụ ya. O nwere ekele maka nkwado nile na ndị mmadụ gosiri ya na Kevin ebe ọ bụ na ha na njide — otú na-ekele gị ka onye ọ bụla bụ onye dere, si ya, mere a onyinye, agbasa mmata banyere ha ikpe, ma tụgharịa ihe AETA ebubo n'ime a oge nke na-egosi ịdị n'otu.
Ememe nke ụbọchị na Tyler, na-ewekwa oge na- support ndị ka na-tụrụ mkpọrọ na-arụ ọrụ maka ụmụ anụmanụ, bụ ndị ka ná ngịga.